ISTICMAALKA BASASHA CAGAARAN: FAA'IIDOOYINKA IYO DHAAWACA JIDHKA - BOW
Isticmaalka basasha cagaaran: siyaabo faa'iido leh iyo ka hortag
Maxaa qurxin karaa saxan la yaqaan, waxay siiyaan muuqaal xarrago leh iyo ku dar kalluun yaryar oo ka fiican baalasha basasha cagaaran? Iyadoo ay ugu wacan tahay wax-soo-saarka beeraha (gudaha dalka, aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka daaqa), badeecadani waa la wada isticmaali karaa sanadka oo dhan, xitaa marka ilo kale oo fitamiino ah aan la heli karin. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida aad u ilaalin lahayd basasha cagaaran, maxay tahay isticmaalka iyo haddii ay waxyeello ka soo gaarto isticmaalka.
Ma taqaanaa? Bini'aadanku waxay bilaabeen in ay beeraan basasha sida miraha qudaarta ah dhowr kun oo sano ka hor. Waxaa la aaminsan yahay in warshadani ay leedahay xididada Aasiyaanka ah, laakiin waxaa si fiican loo yaqaanaa dadka deggan Mesopotamiya, Ancient Egypt, Hindiya, Shiinaha, Giriigga, Rome, ma aysan isticmaalin qaanso, laakiin sidoo kale waxay aaminsan yihiin awoodeeda maskaxeed. Askariyadii Hore ee Rome ayaa lagu faray in ay cunaan qaanso si ay u soo celiyaan tamar iyo xoog, iyo sidoo kale inay dhiiri geliyaan. Shiinaha qadiimiga ah, daacuunka ayaa lagu daweeyay shaaha basal, iyo godadka Masaarida ee Masaarida xitaa qashinka lagu qoro derbiyada xabsigooda. Maanta, basasha waa shey caadi ah.
Kalooriyooyinka, halabuurka iyo qiimaha nafaqada ee basasha cagaaran
Basasha cagaaran ayaa aad ugu hooseeya kalooriyada. 100 g oo baadad ah waxaa ku jira 19 kcal oo keliya, haddii aad ka fiirsato in bacaha qoyan ee cagaaran ee aan la cuni karin, weli waa cunto ku darsan, ma ahan koorsada ugu muhiimsan, markaa waxaad ka welweli kartaa ilaalinta dhexda.
Sababta basasha cagaaran waa biyah (illaa 93%), laakiin 7% haray ayaa ah shaqo firfircoon oo fiitamiin-macdan ah si loo xoojiyo jirka.
Sidaas Basasha cagaaran waxaa ka mid ah borotiinka (1.2%), carbohydrates, oo ay ku jiraan monosaccharides iyo disaccharides (4.7%), fiber (0.8%), iyo sidoo kale asids organic, saliidaha lagama maarmaanka ah, pectins iyo ash. Dufanka ku dhex jira basasha cagaaran maahan!
Kooxda Vitamin ee basasha cagaaran ayaa lagu soo bandhigay noocyo kala duwan. Haddii aad diyaargarowdid fitamiinada ku jira baalasha hoos u dhacaya, taxanuhu wuxuu u egyahay sidaan: Ascorbic acid (fitamiin C), folic acid (fitamiin B9), beta-carotene (fitamiin A), tokopherol (fitamiin E), niacin (fitamiin B3, isla PP), riboflavin (vitamin B2), thiamin (vitamin B1). By habka, waxaa jira fitamiino badan oo baadad ah ee basasha cagaaran ka badan nalka laftiisa.
Liiska liiska macruufiyeyaasha ee basasha cagaaran sidoo kale waa mid cajiib ah. Waa (hoosta): potassium, kalsiyum, magnesium, sodium, fosfooraska. Qaybaha raadinta ee basasha cagaaran, copper waa tan ugu badan, marka lagu daro, waxaa jira molybdenum, cobalt, birta, zinc iyo manganese.
Qiimaha nafaqada ee basasha cagaaran ayaa lagu go'aamiyey halabuurka kiimikada. Sidaas Dhibaatada kaliya ee ay soo saartay nafaqada ee basasha cagaaran ayaa ah heerka sonkorta ee sareysa. Laakiin ka mid ah faa'iidooyinka ayaa la ogaan karaa: maqnaanshaha dufanka (dufan iyo polyunsaturated) iyo kolestarool; Waxyaabaha ugu yar ee soodhiyamka leh nuxur aad u sarreeya ee fiber, kalsiyum, birta, manganese, magnesium, potassium, qadar ku filan ee zinc iyo fosfooraska, iyo waliba waxyaabo aad u sarreeya oo fitamiin C, A iyo B.
Guryaha waxtarka leh iyo daaweynta basasha cagaaran
Faa'iidooyinka basasha cagaaran waa halyeey. Iyada oo ay sabab u tahay ka kooban, baaluqyadaas waxay u shaqeeyaan sida antiseptic, waxay leeyihiin anti-bararka, bactericidal, guryaha antimicrobial.
Baastooyinka cagaaran, badanaa waxaa sabab u ah phytoncides oo ku jirta iyo cabirka xaddiga fitamiin C, waxay bixiyaan ka hortag ah hargabka iyo infekshannada kale ee neefsashada (labadaba bakteeriyada iyo bakteeriyada), sii kordhaya iska caabinta jirka iyo adkeysiga.
Sidoo kale Neefsashada ayaa si aad ah ugu fiicnaan karta dheefshiidka. Waxay ka caawisaa hagaajinta nidaamka dheef-shiid kiimikaadka oo ka takhaluso jirka sunta, xajka iyo waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn. Kaliya labo bambo basal oo cagaaran ah ayaa ku filan si loo hagaajiyo rabitaanka cuntada, halka habka isdhaafka cuntadu uu u fiicanyahay, dareenka maqaarku ma dhicin.
Iyadoo la tixraayo qadarka badan ee chlorophyll, basasha cagaaran waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan hababka hematopoietic, waxaana jira horumarin guud oo ka kooban unugyada dhiigga. Iyadoo la dhaqaajinayo unugyada dhiigga cad, kuwaas oo ah difaacayaasha ugu muhiimsan ee jidhka ka soo horjeeda unugyada yaryar ee jirka, basasha cagaaran waxay ka hortagaan kansarka. Xaddiga xaddiga dhiigga ee dhiigga ku jira dhiigga wuxuu saameeyaa caafimaadka guud ee qofka - waxaa jira dareen farxad leh, diyaar u ah inuu sameeyo tallaabo firfircoon. Sidaa daraadeed, basasha cagaaran ayaa lagu muujiyaa dadka qaba daal daba-joog ah iyo diiqad. Saameynta faa'iido ee basasha cagaaran ee nidaamka wadnaha iyo xididdada ayaa la xusay, xitaa waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo ka hortagga xanuunka atherosclerosis. Sidoo kale badeecadaasi waxay caadeysantahay cadaadiska dhiigga.
Kalsiyum iyo fosfooraska ku jira basasha cagaaran ayaa lagama maarmaan u ah xubnaha, lafaha iyo ilkaha, iyo zinc waxay hagaajineysaa xaaladda maqaarka, taariiqyada iyo timaha (waxaa jira saameyn togan oo ah isticmaalka basasha leh timo lumis iyo xiirasho). Intaa waxa dheer, la'aanta jinsiga ee jirka ayaa si xun u saameeya hawsha taranka waxayna yaraynaysaa habka difaaca jirka.
Chives waxay ka hortagtaa samaynta dhagxaan kelyaha. Waxyaabahaan waxaa ku jira cuntada oo loogu talagalay sonkorowga mellitus, iyo sidoo kale loo isticmaalo dietology in laga takhaluso miisaanka xad-dhaafka ah, taas oo ka qayb qaadata nuxurka sare ee fiber ee baalasha basasha cagaaran. Intaa waxaa dheer, waxaa la ogaaday in basasha cagaaran, lagu daro cunto aan la karin, waxay ka dhigeysaa wax yar oo cusub, taas oo sidoo kale muhiim u ah nafaqada cuntada, iyada oo ku salaynaysa xaddiga milixda ku jirta suxuunta.
Ma taqaanaa? Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah arrimaha ugu murugada leh ee la xidhiidha isticmaalka basasha cagaaran, waa ur aan fiicnayn oo loo qeybiyo afkiisa. Si aad uga takhalusto dhibaatadan, waxaad isticmaali kartaa daawooyinka dadweynaha: calal daadi dhir ah, cun cun nuts, cab cabitaan shaah cagaaran ama caano.
Basasha cagaaran ee ragga
Marka lagu daro saameynta xoojinta guud ee geedaha cagaaran ee jirka bini-aadmiga ah, waxaa jira sababo dhowr ah oo lagula taliyo ragga.
Waa maxay qaanso waxtar leh, gaar ahaan cagaaran, ragga, si fiican u fahmi kara wakiilada jinsiga xooggan, kuwaas oo la kulma calaamado xanuun badan ee prostatitis. Nasiib darro, xaaladaha casriga ah, ragga intooda badan ka dib 40-50 sano waxay ogaadaan waxa cudurkan ka dhigan yahay. Chives, si joogta ah u wada baabi'iyay da 'yar iyo gaar ahaan qaan-gaarnimada, waxay yareeyaan suurtagalnimada cudurkan iyo ciladaha soo foodsaartay.
Sidoo kale, baadadaha cagaaran ee cagaaran waxay kordhiyaan dhaqdhaqaaqa shahwada waxayna kordhiyaan lambarkooda, taas oo kordhinaysa suurtogalnimada ra'yi. Intaa waxaa dheer, basasha cagaaran waa aphrodisiac dabiiciga ah, sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadida waxbarashada ee jirka ee hormoonka haweenka - testosterone, taas oo ay ugu wacan tahay ninku inuu noqdo jinsi firfircoon. Sidaa darteed, basasha cagaaran ayaa lagula talinayaa sidii looga hortagi lahaa awood la'aan.
Chives inta lagu jiro uurka
Faa'iidooyinka basasha cagaaran ee haweenka ayaa sidoo kale leh sifooyin gaar ah, gaar ahaan xilliga uurka.
Cunista haweeneyda uurka leh waa saynis culus. Laga soo bilaabo walxaha haweenku heli doonaan inta lagu jiro muddadan, waxay ku xiran tahay oo kaliya horumarka ilmaha caloosha, laakiin sidoo kale caafimaadka hooyada mustaqbalka. Sidaa darteed, xaqiiqda ah in haweenku aanay dareen bixin karin nolol maalmeedka inta ay uurka leeyihiin.
Fitamiin B9, oo ku jira basasha cagaaran, ayaa ah mid gabi ahaanba lagama maarmaanka u ah marxaladaha ugu horeeya ee asalka nolosha - marka qaybta unugyada, sameynta nidaamka dareemayaasha, wareegga dhiigga, xubnaha iyo unugyada ilmaha caloosha. Yaraanta walaxadani waxay keeni kartaa ilmo iska soo ridid ​​wuxuuna sidoo kale keenaa isbeddello kala duwan oo ku yimaada horumarka ilmaha. Sidaa darteed dumarka waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan basasha cagaaran ka hor intaanay uur lahayn, iyo sidoo kale inta lagu jiro seddexda bilood ee ugu horeeya.
Intaa waxaa dheer, inta lagu guda jiro uurka, basasha cagaaran waxay sidoo kale lagama maarmaan u tahay inay qabato hawlo faa'iido leh oo ku xiran sheygan, sababtoo ah hargabka iyo cudurrada kale ee fayraska ee haweenka uurka leh waxay noqon karaan kuwo ka khatar badan kuwa kale ee bukaannada. Sidoo kale, sida lagu xusay, basasha cagaaran waxay hagaajinaysaa caafimaadka guud, waxay yareyneysaa daal, waxay caawisaa in la kordhiyo rabitaanka cuntada oo ay hagaajiso hurdada - dhammaantani waa gebi ahaan lagama maarmaan u ah haweeneyda uurka leh. Intaa waxaa dheer, haweenka uurka leh ayaa si gaar ah ugu nugul avitaminosis, laga bilaabo halkan aragtida baalasha dhowr ah ee basasha cagaaran waxay noqon kartaa gaabin dhab ah!
Waa muhiim! Si kastaba ha noqotee, qeybtii dambe ee uurka, way ka fiicantahay in la yareeyo isticmaalka basasha cagaaran, maadaama badeecadani ka badan tahay kicinta cunuggu u nugul yahay cudurrada xasaasiyadda.
Kaydinta, hababka goosashada cagaaran
Hooyo kasta waa ogyahay sida ugu dhakhsaha badan ee baalasha basasha cagaarka ah u noqdaan booris aan waxtar lahayn iyo sida ay u adag tahay in alaabtan la ilaaliyo ugu yaraan dhowr maalmood. Xaaladdan oo kale, dhammaan sifooyinka wanaagsan ee basasha cagaaran ayaa sidoo kale lumay si dhakhso ah.
Daaweynta kuleylaha ma aha ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee lagu kordhinayo nolosha basasha cagaaran: Ku dhowaad wax kasta oo kor lagu sharxay oo ku saabsan saameynta wanaagsan ee badeecadani ku saabsan caafimaadka waxay si gaar ah u leedahay baal cusub.
Sidaa darteed, waa suurad wacan in ay cunaan basasha cagaaran isla markiiba ka dib goosashada, gaar ahaan tan caleemaha kuwaas oo la abuuri karaa sanadka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, haddii goosashada basasha cagaaran ay tahay mid aad u ballaadhan ama sababo kale waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo wakhti dheer, waxaa jira dhowr siyood oo lagu ilaaliyo baadooyinka ka soo goosta dhaqso.
Cagaarka cusub ayaa la keydin karaa dhowr maalmood, isaga oo ku riday weel kusi ah sida bouquet. Iyada oo basasha cagaaran, habkani ma shaqeynayo - ka soo xirashada biyaha, baalasha si dhakhso ah ayaa lumiya muuqaalkooda waxayna bilaabaan "dabaasha." Sidaa darteed, si aad u dhigto basasha cagaaran waxay noqon kartaa miiska ama qaboojiyaha. Sababtoo ah saameynta xun ee boogaha biyaha, waxaa wanaagsan in aan hore loo dhaqin, iyo haddii loo baahdo, ku tirtir maro qalalan ama maro, iyo haddii ay jirto qoyaan boomaha, marka hore si fiican u qalaji. Sidoo kale, ka hor inta aan la kaydin, dhammaan boogaha la qalajiyey iyo waxyeello waa in laga saaraa.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu keydiyo qaboojiyaha cagaaran ee qaboojiyaha.
Xulashada ugu horeysa - dhalo quraarad ah, si adag ugu dabool dabool, waxay kuu ogolaaneysaa inaad dibedda ku hayso dhowr todobaad.
Waa muhiim! Haddii aad leexiso baadiyaha basasha cagaaran, waxay ku dhuftaan si dhaqso badan, sidaa daraadeed habkani wuxuu ku haboon yahay oo keliya bucooyinka, xajmiga kaas oo kuu ogolaanaya inaad si buuxda u geliso bangiyada.
Xulashada labaad waa inay boogaha ku ridaan bac caag ah, si adag u xir, ka dib marka la sameeyo meelo dhowr ah oo loogu talagalay hawo. Ka hor inta aan la gelin bucooyinkii xirmada, waa in lagu hayaa qaboojiyaha iyada oo aan baako ku jirin nus saac. Tani waxay yarayn doontaa heerkulka basasha oo ka fogow gogol dusiga hoose ee boorsada marka basasha la dhigo qaboojiyaha (sida lagu sheegay, biyaha ayaa si weyn u gaabin doona nolosha shafka ee basasha cagaaran).
Doorashadani maahan mid ku haboon qaboojiyaha nidaamka qaboojiyaha, tan iyo markii ay qaylo-dhaanku soo saaraan badeecada si deg deg ah marka hawada la siiyo.
Waxaad xitaa ku hayn kartaa basasha ku duudduubay dhar qaro weyn.
Qaboojinta basasha cagaaran waa qaab fudud oo ah kaydinta mudada dheer. Xaaladdan oo kale, baalasha waxay wali u baahan yihiin in la dhaqo oo la qalajiyo, sida basasha la dhalaalay ayaa isla markiiba lagu darayaa cuntada. Waxaa fiican inaad ku kaydiso basasha ee foomka la jaray marba marka ka dib, barafka ka dib, waxay noqon doontaa mid aan habooneyn in la gooyo, baalasha oo idil ma noqon doonto mid ku habboon isticmaalka.
Konteynooyinka gaarka ah ama caleenta xirmooyinka leh waxay ku habboon yihiin barafka. Qaarkood waxay kugula talinayaan inay isticmaalaan dhalooyinka caaga ah ee nadiifka ah iyo qalalan. Marka hore, basasha la jarjarey ayaa lagu dhajiyay dusha sare waxayna dhigtaa qaboojiyaha dhowr saacadood, oo kaliya kadib marka la qaboojiyo oo la gooyo weelasha diyaarka ah - haddii kale cagaarka cagaarka ayaa barafoobaya hal buro, waxaana kaliya oo lagama maarmaan ah in si buuxda loo isticmaalo (ma aad marin kartid basasha mar labaad).
Waa in la fahamsan yahay in qaboojiyuhu uu kuu ogolaanayo inaad basbaasta cagaaran ku habboon ku dartid suxuuno kala duwan, si kastaba ha ahaatee, baadad cagaaran waxay luminaysaa macaankooda qoyaan la'aan ah.
Tani waa hab aan caadi ahayn ee kaydinta basasha, iyo sidoo kale - doorasho wanaagsan oo loogu talagalay diyaarinta badeecada isticmaalka mustaqbalka.
Maydhin, la qalajiyey oo la kariyay basasha cagaaran waa in la googooyaa oo lagu dhajiyaa dhalooyinka dhalooyinka ee lakabyada, oo si nadiif ah ugu rushaynta milixda (isticmaalka cusbada - 200 g halkii 1 kg oo basasha). Bangiyadu si adag u xidhaan oo lagu keydiyaa qaboojiyaha mudo ilaa lix bilood ah.
Waa muhiim! Joogitaanka cusbada ee la goostay basasha waa in la tixgeliyaa marka lagu daro suxuunta kala duwan si aanay u soo bixin saliid.
Marka laga reebo salting, basasha cagaaran ayaa sidoo kale noqon kara qasacadeysan iyo pickled.
Wixii ilaalinta, baalasha basasha cagaaran, maydheen lana nadiifin, waxaa lagu dhajiyaa vertically dhalooyinka dhalooyinka leh (baalasha waa in marka hore la gaabiyo dhererka kusaddii). Ka dibna ku shub biyo karkaraya keruubka, dabool oo iska bixi kuleylka shan daqiiqo. Kadibna biyaha ayaa la miiray, la kariyey, mar kale ku celcelinay nidaamka. 1 daqiiqo oo sonkor ah, 1 qaado oo cusbo ah, 1 qaado oo geedo ah 9%, caleenta, barkhada kulul, allspice, oo toon ah - inay dhadhamiso). Marinade waxaa la kariyaa dhowr daqiiqo, ku shubay dhalooyinka, ka dib markii ay ku daboolan yihiin daboolka oo gadaal u rogay si buuxda.
Marinade waa la diyaarin karaa iyadoo la raacayo qariidad kale. Khamriga qallalan ee qallalan waxaa lagu qasi karaa biyaha 1: 1, oo la karkariyey dhowr daqiiqadood oo lagu daray qadar yar oo malab ah dareeraha (qiyaastii 2 tbsp, halkii 300 ml oo khamri ah), qanjaruufo cusbo ah iyo geedo yar oo geedo cusub ah. Cannabada loo diyaariyay basasha ee lagu sharxay qaabka kor lagu sharaxay waxaa lagu buuxiyey marinade, daboolay daboolka iyo jeermiska lagu qubeysto biyaha qubeyska (0.5 L - 10 daqiiqo, 1 l - 15 daqiiqo), ka dibna laga saaro kuleylka, la duubay oo loo rogay qabow.
Sida loo isticmaalo basasha cagaaran ee kondomoole
Sida lagu sheegay, zinc ku jira basasha cagaaran waxay hagaajineysaa xaaladda maqaarka, xoojinta ciddiyaha iyo timaha, taas oo ay ugu wacan tahay sheyga loo isticmaalo kondomoole.
Baastada bilawga ah ee ujeeddadan waxay isticmaalaan oo keliya cusub, aan la karin. Baalasha basasha adoo isticmaalaya blender ama waxsoosaar hilib ah diyaariya slurry, taas oo loo isticmaalo sida maaskaro timaha ama cadaadiska on ciddiyaha. Waqtiga soo-gaadhista waa ugu yaraan 40 daqiiqo. Ku dhaq maaskaro oo ku cadaadiya biyo diirran saabuun ilmaha. Si loo wanaajiyo saameynta habraaca waa in la sameeyaa laba jeer toddobaadkii.
Cagaarka cagaaran ee karinta
Chives waxaa loo isticmaalaa in lagu karsado inta badan sida additive ah ee suxuun kasta, marka laga reebo laga yaabaa in macaan. Baalashadan xarrago leh waxay qurxin karaan muuqaalka iyo dhadhanka cuntooyinka kala duwan, maraqa, suugada, khudaarta, hilibka iyo kalluunka.
Tusaale ahaan, maraq digaag leh ku rusheeyeen lakabyo cusub ayaa soo gashaa dhadhanka iyo dhadhanka oo dhammaystiran. Ukunta ukunta leh iyo ukunta qallafsan ayaa loo arkaa hab cusub oo leh basasha cagaaran. Iyada oo baadad basbaas basbaas, siriyeyaasha caadiga ah noqdaan kuwo aad u badan.
Si kastaba ha noqotee, suxuunta qaar ka mid ah basasha cagaaran waxay qabataa shaqada ugu weyn ama mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan.
Tusaale ahaan, okroshka iyo botvinia waa maraqyo qabow, aan lagu fakari karin iyada oo aan lagu darin tiro badan oo basasha cagaaran. Saladhyada waxaa lagu sameeyaa iyadoo ku saleysan baalasha basasha cagaaran, iyo sidoo kale buuxinta caanaha (sida caadiga ah lagu daro ukunta la kariyey, laakiin suurtagal ma leh).
Basasha cagaaran ayaa lagu dari karaa qaabka la jarjaray (nala yaqaan nambarada ama habka quruxda badan ee loo yaqaan 'exotic struts') - baalal-xargaha la jarjaray oo la jarjaray), laakiin basasha ayaa la siiyaa gebi ahaan hilibka hilibka calorie iyo baruurta.
Basasha cagaaran xitaa waxaa lagu dubi karaa grill, ka dib markii la saliiday saliidda cuntada. Waqtiga wax qabadku waa dhowr daqiiqo, natiijadu waa mid aan caadi ahayn, gaar ahaan haddii aad xilli ku jirto saxanka leh suugo yaryar oo basbaas ah.
Contraindications iyo waxyeelo ah basasha cagaaran
Waxay noqon kartaa qalad ah in laga hadlo khatarta basasha cagaaran. Si fudud, waxaa jira shuruudo taas oo sheygan aan la isticmaali karin ama ku xaddidneyn soo dhaweynta qaybo yaryar.
Sidaa darteed, taxaddar waxaad u baahan tahay inaad cuntid basasha cagaaran oo loogu talagalay dadka qaba cudurrada kala duwan ee kelyaha, kaadiheysta cagaaran, beerka iyo mindhicirka, gaar ahaan foomka faafa iyo gaar ahaan inta lagu jiro mudada sii xumeynayo.
Qadarka xad dhaafka ah ee basasha cagaaran oo aan la cunin kaliya ma keeni karto cadho xuubabka xuubka ah ee xubnaha gudaha, laakiin sidoo kale waxay kordhiyaan kiimikada cabitaanka gastricTani waxay sharraxaysaa khilaafka isticmaalka aan la xakamayn ee basasha cagaaran oo leh qandho sare leh, xitaa haddii cudurada soo noqnoqonaya ay maqan yihiin.
Dhiig-baxa, taakulada iyo dhibaatooyinka kale ee la yaqaan ee nidaamka wadnaha iyo xididada - sabab u ah in aan lagu xadin basasha cagaaran. Ugu dambeyntii, waxaa jira xaalado marka xaddi badan oo ka mid ah badeecadani ay ka dhalisay xaalad ka sii daraysa xaaladda dadka qaba xiiq-dheeriga.